Abafana bahlambalaza "izingubo ezingenalutho" Natalia Ionova
Ngolunye usuku uNatalia Chistyakova-Ionova, owaziwa njengomphakathi njengomculi uGluckoZa, wavela esiteji se-Muz-TV egqoke ingubo epholile. Abasebenzisi be-intanethi baxoxa ngentshiseko ngengubo yenkanyezi bese bebuza - umyeni womyeni ubheka kuphi?
Isibalo sika Natalia Ionova sibhekene nokuziqhenya kwakhe. Ukuba ngumama wezingane ezimbili, lo mdwebi unesimo esiphelele, esisekelwa yi-yoga njalo yokuzivocavoca. Kumculi we-instagram uvame ukubona izithombe ezivela ekuqeqesheni.
Yiqiniso, amafomu anjalo akusona isono sokubonisa abanye, isibonelo, ngesikhathi sesithombe. Kodwa-ke, u-Natalia uvame ukuvela izingubo ezingenamahloni ezenzakalweni ezingafani kakhulu ukubonisa ngisho nomzimba onjalo omuhle njengomculi.
I-Gluck'oZa ngokwayo ibonakala ijabule ngesithombe sayo "emgqokeni ongabonwayo": inkanyezi yashicilela izithombe eziningana ngesikhathi esisodwa kule ngubo ekhasini lakhe le-instagram yakhe.
Kodwa abhalisile bayo bahlela ingxoxo evuthayo, bexoxa ngokuvuma kwezithombe ezinjalo ezivusa amadlingozi:
Kule minyaka yobudala sekuyisikhathi sokuqala ukugqoka, futhi ugxila kakhulu. Uyini isibonelo samadodakazi? Ukungabi namahloni
Natasha, awudingi izikhwama ezinjalo. Bheka ezishibhile, kuphazamisekile futhi kunambitheka okubi kukhona
Ingabe indoda iyavuma ukukhetha ukukhetha? Mhlawumbe, kufanele kube nokuthobeka kancane, isimo ngemuva kwakho konke "," Kuye kwasobala, kusobala ukuthi busted
Ukugqoka kubangela ukukhathazeka okweqisayo nokubi. Ungumama wamakhosazana amabili! Ebhishi kwakuzobonakala kubaluleke kakhulu.
UNastasya Samburskaya utshele indlela yokugcoba amazinyo ngokushesha
U-Alexander Vasilyev ushiya "umusho onobuhle"
U-Timati, u-Alyona Shishkova no-Anastasia Reshetova baziqhenya ngamabhayisikobho
UmkaGarik Martirosyan "waphonsa" u-Alsou ngamaruble ayizigidi
Izithombe ezishaqisayo kunazo zonke ku-MUZ-TV 2017: u-Olga Buzova ongunqunu, u-Ksenia Sobchak okhulelwe, u-Anastasia Reshetova oshukumisayo
U-Exist soloist weqembu elithi "Leningrad" u-Alisa Voks wakhuluma ngokuningiliziwe ngokufa kwakhe
Indodana kaValery u-Arseny Shulgin washiya indlu
Izinyathelo zokuqala kanye nengane
Umyeni uphuza ubhiya nsuku zonke
Indlela yokunquma umsebenzi wobulili womlingani ngendlela yakhe yokudla?
U-Vladimir Putin no-Alina Kabaeva: izindaba zakamuva zithandanikazi yaseRussia enesabekayo 2017
AmaKhoksi amaFancy aMnandi
I-pasta nama-mushroom ne-thyme
Kungani abafana bakhetha abangane bese beshiya amantombazane abo?
Iyiphi uhlobo lwesilwane sokuthenga ingane?
Yiziphi izibonakaliso zokukhetha ukwenza izimonyo
Ukunakekela isikhumba evamile ebusweni
Isaladi nge-rucola no-utamatisi
Izesekeli zezinwele ngezandla zakho
Imfashini yezintambo ezisezingeni eliphezulu kakhulu 2016, izithombe zezinhlobonhlobo ezinhle kakhulu